आजको राशिफल – Aajako Rashifal, २०७७ मंसिर २९ गते, सोमवार, १४ डिसेम्बर २०२० – bampijhyala.com
Home > आजको राशिफल > आजको राशिफल – Aajako Rashifal, २०७७ मंसिर २९ गते, सोमवार, १४ डिसेम्बर २०२०
आजको राशिफल – Aajako Rashifal, २०७७ मंसिर २९ गते, सोमवार, १४ डिसेम्बर २०२०
२९ मंसिर २०७७, सोमबार ०६:५३ bampijhyala
गोपनीयता बाहिरिनाले काममा बाधा पर्नेछ। दौडधुपमै समय बित्नेछ भने आँटेको काम स्थगित हुन सक्छ। आफ्ना कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउने चेष्टा गर्लान्। मिहिनेत गरीकन चिताएको मूल्य प्राप्त नहुने देखिन्छ। अध्ययनमा बाधा पुग्नेछ भने अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्नेछ। वादविवादले समस्या निम्त्याउन सक्छ। हुलमुलमा धनमाल जोगाउन सजग रहनुहोला।
स्वास्थ्य–चिन्ताले सताउन सक्छ। हल्लाको पछि लाग्दा दु:ख पाइनेछ। गोपनीयता बाहिरिनाले पनि काममा समस्या आइपर्ला। बलभन्दा बुद्धिको उपयोगले फाइदा दिलाउनेछ। परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि मिहिनेतले लक्ष्यमा पुगिनेछ। प्रतिस्पर्धाको दौड जित्न सकिनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
परिस्थितिवश आँटेको काममा बाधा हुन सक्छ। हल्लाको पछि लाग्दा दु:ख पाइनेछ। स्वास्थ्यसम्बन्धी चिन्ताले सताउन सक्छ। समयको तालमेल नमिल्दा योजना अधुरै रहनेछ। अध्ययनमा त्यति समय दिन नसकिएला। प्रतीक्षित नतिजाले कम दोहोर्याउनुपर्ने स्थिति निम्त्याउन सक्छ। मेहनतले परिस्थितिमा सुधार ल्याउन सकिनेछ। नयाँ काम थाल्न केही समय प्रतीक्षा गर्नुहोला।
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। पहिले गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ। कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ। चल-अचल धनको उपयोगबाट मनग्गे फाइदा उठाउन सकिनेछ। पछिसम्म फाइदा हुने कामको जग बसाउने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ।
शारीरिक कमजोरीले केही चिन्ता बढाउन सक्छ। बाध्यताले अलमल्याउन सक्छ। अरूका लागि समय, धन र बुद्धि खर्चनुपर्ला। अरूका काममा समय खर्चनुपर्दा आफ्ना काम रोकिन सक्छन्। सामाजिक उत्तरदायित्व प्राप्त भए पनि जिम्मेवारी पूरा गर्नमा बाधा हुनेछ। परिस्थितिवश आफन्तबाट टाढिनुपर्ने हुन सक्छ। तापनि, लगनशीलताले उपलब्धिको स्रोत प्राप्त हुनेछ।
सार्वजनिक जग्गा भाडामा नदिन पत्राचार
अर्जेन्टिना र चिलीले बराबरी २९ मंसिर २०७७, सोमबार ०६:५३
विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र आजदेखि शुरु २९ मंसिर २०७७, सोमबार ०६:५३
काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञा कति खुकुलो ? कति कराई ? २९ मंसिर २०७७, सोमबार ०६:५३
हजुरको आजको दिन, ०७८ असार १ गते, मंगलवार, १५ जुन २०२१। २९ मंसिर २०७७, सोमबार ०६:५३
महामारीको असर कहिले कम र कहिले धेरै छ, रोमथामका प्रयास निरन्तर चाहिन्छ : उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठ २९ मंसिर २०७७, सोमबार ०६:५३